यूहन्ना ८ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
कोडेक्स साइनाइटिकस, कोडेक्स भ्याटिकनस र साइनाइटिक सिरियाक कोडेक्स पाण्डुलिपिहरूमा ७:५३ देखि ८:११ सम्मका पदहरू पाइँदैन। (विभिन्न ग्रीक लेखोट अनि अनुवादहरूमा केही भिन्नता भए तापनि) ती पदहरूमा यस्तो लेखिएको छ: ५३ तब तिनीहरू आ-आफ्नो घर गए। ८ तर येशू भने जैतुन डाँडा जानुभयो। २ तर उज्यालो हुनेबित्तिकै उहाँ फेरि मन्दिरमा उपस्थित हुनुभयो अनि सबै मानिस उहाँकहाँ आउन थाले। त्यसपछि उहाँ बस्नुभयो र तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो। ३ तब परपुरुषसित यौनसम्बन्ध राखिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेकी एक जना स्त्रीलाई शास्त्री र फरिसीहरूले उहाँकहाँ ल्याए अनि उसलाई मानिसहरूको माझमा उभ्याए। ४ त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई भने: “गुरुज्यू, यो स्त्री परपुरुषसित यौनसम्बन्ध राखिरहेको अवस्थामा पक्राउ परी। ५ यस्ती स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने आज्ञा मोशाको व्यवस्थाले हामीलाई दिएको छ। तपाईंचाहिं के भन्नुहुन्छ?” ६ निस्सन्देह, उहाँको परीक्षा गर्न तिनीहरूले यसो भनेका थिए, ताकि कुनै निहुँ भेट्टाएर उहाँलाई दोष लगाउन सकियोस्। तर येशू निहुरिनुभयो र आफ्नो औंलाले भुइँमा लेख्न थाल्नुभयो। ७ जब तिनीहरूले उहाँलाई सोधेको सोध्यै गरे, तब शिर उठाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूमध्ये जो पापरहित छ, त्यसले नै पहिला उसलाई ढुङ्गाले हानोस्।” ८ अनि फेरि निहुरिएर उहाँले भुइँमा लेख्न थाल्नुभयो। ९ तब उहाँको कुरा सुन्नेहरूजति, धर्म-गुरुहरूदेखि सुरु गरेर सबै जना, पालैसित बाहिर निस्के अनि अन्तमा उहाँ र त्यस स्त्रीबाहेक अरू कोही बाँकी भएन। १० शिर उठाएर येशूले उसलाई भन्नुभयो: “ए नारी, खोइ तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई सजाय पाउन लायकको ठहराएन?” ११ उसले भनी: “ठहराएन, हजुर।” येशूले भन्नुभयो: “म पनि ठहराउँदिनँ। जाऊ, तिमी आफ्नो बाटो लाग र अबउसो पाप नगर।” १२ तब येशूले तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो: “म संसारको ज्योति हुँ। जो मेरो पछि लाग्छ, ऊ कुनै हालतमा अन्धकारमा हिंड्नेछैन, बरु उसले जीवनको ज्योति पाउनेछ।” १३ त्यसैले फरिसीहरूले उहाँलाई भने: “तिमी आफ्नै विषयमा साक्षी दिन्छौ; त्यसैले तिम्रो साक्षी सत्य छैन।” १४ तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मैले आफ्नै विषयमा साक्षी दिए तापनि मेरो साक्षी सत्य छ, किनकि म कहाँबाट आएँ र कहाँ जाँदैछु, मलाई थाह छ। तर म कहाँबाट आएँ र कहाँ जाँदैछु, तिमीहरूलाई थाह छैन। १५ तिमीहरू रूप हेरेर न्याय गर्छौ; तर म त कसैको न्याय नै गर्दिनँ। १६ अनि मैले न्याय गरें नै भने पनि मेरो न्याय सही हुन्छ, किनकि म एक्लो छैन तर मलाई पठाउनुहुने बुबा मसँग हुनुहुन्छ। १७ साथै, ‘दुई जना मानिसले दिएको साक्षी सत्य हुन्छ’ भनेर तिमीहरूको आफ्नै व्यवस्थामा लेखिएको छ। १८ आफ्नो विषयमा साक्षी दिने एक जना मै हुँ अनि मलाई पठाउनुहुने बुबाले पनि मेरो विषयमा साक्षी दिनुहुन्छ।” १९ त्यसैले तिनीहरूले उहाँलाई फेरि सोधे: “तिम्रो बुबाचाहिं कहाँ छ नि?” येशूले जवाफ दिनुभयो: “तिमीहरू न मलाई चिन्छौ न त मेरो बुबालाई। तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरो बुबालाई पनि चिन्ने थियौ।” २० मन्दिरमा दानपात्रहरू राखिएको ठाउँमा बसेर सिकाइरहेको बेला उहाँले यी कुराहरू भन्नुभएको थियो। तैपनि कसैले उहाँलाई पक्रेन, किनकि उहाँको बेला अझै आइपुगेको थिएन। २१ त्यसैले उहाँले तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो: “म जाँदैछु र तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ तैपनि तिमीहरू आफ्नो पापैमा मर्नेछौ। म जहाँ जाँदैछु, त्यहाँ तिमीहरू आउन सक्दैनौ।” २२ त्यसकारण यहूदीहरूले भन्न थाले: “यसले आत्महत्या गर्न लाग्यो कि कसो? किनकि यसले ‘म जहाँ जाँदैछु, त्यहाँ तिमीहरू आउन सक्दैनौ’ भन्दैछ।” २३ त्यसैले उहाँले तिनीहरूलाई अझ यसो भन्नुभयो: “तिमीहरू तलका हौ; म माथिको हुँ। तिमीहरू यस संसारका हौ; म यस संसारको होइन। २४ त्यसकारण मैले तिमीहरूलाई भनें, तिमीहरू आफ्नो पापैमा मर्नेछौ। किनकि आउनेवाला मै हुँ भनेर यदि तिमीहरूले विश्वास गरेनौ भने तिमीहरू आफ्नो पापैमा मर्नेछौ।” २५ त्यसैले तिनीहरूले उहाँलाई भन्न थाले: “तिमी को हौ?” येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूसित कुरा गर्नु नै बेकार छ। २६ तिमीहरूको विषयमा मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै छ अनि न्याय गर्नुपर्ने कुरा पनि धेरै छ। साँच्चै भन्ने हो भने, मलाई पठाउनुहुने सत्य हुनुहुन्छ अनि उहाँबाट मैले जे सुनें, संसारमा त्यही कुरा बोल्दैछु।” २७ उहाँले तिनीहरूसित आफ्नो बुबाको विषयमा कुरा गरिरहनुभएको थियो भनेर तिनीहरूले बुझेनन्‌। २८ त्यसकारण येशूले भन्नुभयो: “तिमीहरूले मानिसको छोरालाई टाँगेपछि यो थाह पाउनेछौ कि आउनेवाला मै हुँ र आफूखुसी म केही पनि गर्दिनँ तर बुबाले मलाई जे-जे सिकाउनुभयो, तिनै कुराहरू बोल्छु। २९ अनि मलाई पठाउनुहुने मसँगै हुनुहुन्छ; उहाँले मलाई एक्लै छोड्नुभएको छैन, किनकि म सधैं उहाँलाई मनपर्ने कामहरू गर्छु।” ३० उहाँले यी कुराहरू भनिरहनुभएको बेला धेरै जनाले उहाँमाथि विश्वास गरे। ३१ त्यसैले उहाँमाथि विश्वास गरेका यहूदीहरूलाई उहाँले अझै यसो भन्नुभयो: “तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेलाहरू हौ, ३२ अनि तिमीहरूले सत्य थाह पाउनेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनेछ।” ३३ तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए: “हामी अब्राहामका सन्तानहरू हौं अनि हामी कहिल्यै कसैको दासत्वमा परेका छैनौं। ‘तिमीहरू स्वतन्त्र हुनेछौ’ भनेर तिमी किन भन्छौ?” ३४ येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, पाप गर्ने हरेक मानिस पापको दास हो। ३५ साथै, दास सधैंभरि मालिकको घरमा रहिरहँदैन तर छोरा भने सधैंभरि रहिरहन्छ। ३६ त्यसकारण छोराले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र बनायो भने तिमीहरू साँच्चै स्वतन्त्र हुनेछौ। ३७ तिमीहरू अब्राहामका सन्तानहरू हौ भनेर मलाई थाह छ तर तिमीहरू मलाई मार्न खोज्दैछौ, किनकि तिमीहरू मेरो शिक्षा स्वीकार्दैनौ। ३८ आफ्नो बुबासित छँदा मैले जे देखें, म त्यही बोल्छु; त्यसरी नै तिमीहरू पनि आफ्नो बुबाबाट जे सुन्छौ, त्यही गर्छौ।” ३९ तिनीहरूले उहाँलाई भने: “हाम्रो बुबा त अब्राहाम हुन्‌।” येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “यदि तिमीहरू अब्राहामका सन्तानहरू हौ भने अब्राहामको काम गर। ४० तर अहिले तिमीहरू मलाई मार्न खोजिरहेका छौ; एउटा यस्तो मानिसलाई, जसले तिमीहरूलाई आफूले परमेश्वरबाट सुनेको सत्य कुरा बताएको छ। अब्राहामले त तिमीहरूले जस्तो गरेनन्‌। ४१ तिमीहरू आफ्नो बुबाको काम गर्छौ।” तिनीहरूले उहाँलाई भने: “हामी अवैध यौनसम्बन्धबाट जन्मेका होइनौं; हाम्रो बुबा एकै जना हुनुहुन्छ अर्थात्‌ परमेश्वर।” ४२ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “यदि परमेश्वर तिमीहरूका बुबा हुनुहुँदो हो त तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्ने थियौ, किनकि म परमेश्वरबाट पठाइएको हुँ र यहाँ छु। म आफूखुसी यहाँ आएको होइन तर उहाँले नै मलाई पठाउनुभएको हो। ४३ मैले भनेको कुरा तिमीहरू के कारण बुझ्दैनौ? किनकि तिमीहरू मेरो वचन सुन्न सक्दैनौ। ४४ तिमीहरू आफ्नो बुबा दियाबलबाट* आएका हौ अनि आफ्नो बुबाकै इच्छा पूरा गर्न चाहन्छौ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र त्यो सत्यमा अडिग रहेन, किनकि त्यसमा सत्य छैन। जब त्यसले झूट बोल्छ, तब आफ्नो स्वभावअनुसारै बोल्छ, किनकि त्यो झूटा हो र झूटको बुबा हो। ४५ अर्कोतर्फ, म सत्य कुरा बताउँछु तर तिमीहरू मलाई विश्वास गर्दैनौ। ४६ तिमीहरूमध्ये कसले मलाई पापी साबित गर्न सक्छ? यदि म सत्य बोल्छु भने तिमीहरू किन मलाई विश्वास गर्दैनौ? ४७ जो परमेश्वरको हो, उसले परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरू सुन्छ। तिमीहरू परमेश्वरका होइनौ, त्यसैले तिमीहरू सुन्दैनौ।” ४८ यहूदीहरूले उहाँलाई भने: “तिमी सामरी हौ र तिमीमा दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको छ भनेर के हामीले ठीकै भनेका होइनौं र?” ४९ येशूले जवाफ दिनुभयो: “ममा दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको छैन। म आफ्नो बुबाको आदर गर्छु तर तिमीहरू मेरो अनादर गर्छौ। ५० मैले आफ्नै गौरव खोजेको छैन तर जसले मेरो निम्ति त्यो गौरव खोज्नुहुन्छ, उहाँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। ५१ तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, यदि कसैले मेरो वचन पालन गर्छ भने उसले कहिल्यै मृत्यु देख्नेछैन।” ५२ यहूदीहरूले उहाँलाई भने: “तिमीमा दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको छ भनेर अब भने हामीलाई पक्का भयो। अब्राहाम मरे अनि त्यसैगरि भविष्यवक्ताहरू पनि मरे तर तिमीचाहिं ‘यदि कसैले मेरो वचन पालन गर्छ भने उसले कहिल्यै मृत्यु चाख्नेछैन’ भन्छौ। ५३ तिमी हाम्रो बुबा अब्राहामभन्दा ठूलो हौ र? तिनी मरे अनि भविष्यवक्ताहरू पनि मरे। तिमी आफू को हुँ भनी दाबी गर्छौ?” ५४ येशूले जवाफ दिनुभयो: “यदि म आफ्नै महिमा गर्छु भने मेरो महिमा केही होइन। मेरो बुबा, जसलाई तिमीहरू आफ्नो परमेश्वर भन्छौ, उहाँले नै मलाई महिमित तुल्याउनुहुन्छ; ५५ तैपनि तिमीहरूले उहाँलाई चिनेका छैनौ। तर म उहाँलाई चिन्छु। यदि म उहाँलाई चिन्दिनँ भन्छु भने म पनि तिमीहरूजस्तै झूटा हुन्छु। तर म उहाँलाई चिन्छु र उहाँको वचन पालन गरिरहेको छु। ५६ तिमीहरूका बुबा अब्राहाम मेरो दिन हेर्ने आशामा असाध्यै रमाउँथे अनि तिनले त्यो दिन देखे र रमाए।” ५७ त्यसकारण यहूदीहरूले उहाँलाई भने: “तिमी त पचास वर्षका पनि भएका छैनौ, त्यसोभए तिमीले कसरी अब्राहामलाई देख्यौ?” ५८ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, अब्राहाम अस्तित्वमा आउनुभन्दा पहिल्यै म थिएँ।” ५९ त्यसैले उहाँलाई हिर्काउन तिनीहरूले ढुङ्गा टिपे तर येशू लुक्नुभयो र मन्दिरबाट बाहिर निस्कनुभयो।
^ यूह ८:४४ * ग्रीकमा “दियाबोलोस,” जसको अर्थ हो, “निन्दक।”